Ngokuntuleka kwezindiza nemali, abakwaCamair-Co babeka abasebenzi abangama-371 ekungasebenzini kwezobuchwepheshe isikhathi esiyizinyanga ezi-3 - i-Tamban RELAY
Ngokuntuleka kwezindiza nemali, i-Camair-Co ibeka abasebenzi abangama-371 ekungasebenzini kwezobuchwepheshe isikhathi esiyizinyanga ezintathu
By TELES RELAY On Juni 22, 2020
Induna enkulu uDkt Blessed Ndokpe Okole, isazi se-biotechnologist futhi…
Ukuqamba okusha: UQair noSteg bazama ngamandla elanga antantayo nge ...
Isabelomali se-2020: kusuka ngo-Okthoba 15, iCameroon imisa ukuzibophezela ...
(Ibhizinisi eCameroon) - Isimo sempilo seCovid-19 asisizi i-Camair-Co, esivele iswele imali. Embhalweni osanda kwenziwa uNgqongqoshe Wezezimali, umqondisi jikelele wabo, uLouis Georges Njipendi Kuotu, ukuveza lokho "Ukuqalwa kabusha kokusebenza akuhloselwe izinyanga ezintathu, ngokubheka izingqinamba zezimali, kepha futhi nokungatholakali kwemikhumbi".
Kuze kube manje, iCamair-Co ayinazo izindiza ezisebenzayo. Ama-MA60 alo amabili we-yesteryear (afakwe emakethe yasekhaya) adinga ukulungiswa; iBombardier Dash 8 eyingqayizivele ingudaba lokwephulwa kwenkontileka okungahambisani nokwenziwa ngumqashi wayo u-Abu Dhabi Aviation, othi izigidi zezindleko zokuqashwa ezingakhokhwanga; ezimbili zayo ezingama-737-700 (zibethelwe emhlabathini kusukela ngoFebhuwari 2019) zilindele ngabomvu ukuthunyelwa ukuze zigcwaliswe.
Ngenxa yalomqondo onzima (zero zeroover), inkampani yaqhubeka nokulahla abasebenzi abangama-371 kusuka ngoJuni 22, 2020, isikhathi esiyizinyanga ezintathu uma kungadingeka. Ngokusho kokuphathwa kwenkampani, lesi silinganiso "Ihlose ikakhulukazi ukukhawula ukwenyuka okungadingekile kwezikweletu zamaholo, ukunciphisa ubungozi bokuphazamiseka kwabasebenzi nokulawula izindleko zokusebenza".
Ngesikhathi kwenziwa isigaxa sango-Ephreli odlule, uLouis Georges Njipendi Kuotu wayeveze ukuthi izindleko zokuntuleka kwemisebenzi kwezobuchwepheshe kuncike ekushintsheni kwemiholo eyizigidi ezingama-1,479 billion yiFCFA. Lezi zindleko zihlukaniswe phakathi kweholo labantu abangama-206 abazoqhubeka nokusebenza nalabo abangama-371 abazosuswa. Abasebenzi benkampani bebelokhu bebuyisela emuva amaholo kusukela ngoMashi 2020.
I-22-06-2020- I-Camair-Co ifuna izigidi ezingama-371 ze-FCFA eMbusweni ukuze kukhokhelwe i-premium yomshuwalense wama-Boeing 737-700s wayo womabili.
I-16-06-2020- I-Camair-Co ilwela ukuthola uxhaso lwezezimali kuHulumeni ukuhambisa i-Boeing 737-700 NG yayo esikhungweni sezokulondolozwa
FUNDA OKWENGEZIWE LAPHA
TELES RELAY 24433 izikhala 1 amazwana
UJohanna Fadul (uDanielle eCatalina) wenza abalandeli bakhe bahlanyahla ngesithombe ngaphandle kwe-bra futhi bemkhombisa amabhuzu.
USelim ovela ku-Tears of Paradise wadangalisa abalandeli ngokumangala: ngamagama, wow
Induna enkulu uDkt Blessed Ndokpe Okole, isazi sebhayoloji esikhaliphile nomholi webhizinisi e…
Ukuqamba okusha: Ukuhlolwa kukaQair noSteg ngelanga elintantayo eTunisia - Omncane…
Isabelomali 2020: kusuka ngo-Okthoba 15, iCameroon imisa ukuzibophezela ngezivumelwano ...
Amacala abhekene nobuntu eSudan: I-BNP Paribas ihlose uphenyo eFrance -…